IVilla enedama elishushu, indawo yokuhlamba impahla, iPing Pong & Okuninzi
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguFelipe
Ezothando, ezicocekileyo, zabucala kwaye zizolile: zilungele ukuphumla emva kosuku elunxwemeni okanye emsebenzini.
Izihombiso zale mihla, izixhobo zombane eziphezulu kunye nefanitshala, i-82inch smart TV, i-gazebo yabucala enegrill.
Iimayile nje ezi-3 ukusuka elunxwemeni kunye neekhilomitha ezi-1 ukusuka kuhola wendlela i95 kunye nekhilomitha enye ukusuka eWilton Manors. Ukuhamba umgama ukuya kwiivenkile zokutya, iibhari kunye neendawo zokutyela.
Ucoceko oluphucukileyo kwaye ukhululekile. I-Casa Verano Villa inommandla ongaphandle omangalisayo kunye nedama elivuthayo, i-gazebos, i-top of the line ping pong table, i-2 ye-Weber grills kunye neetafile ezininzi zokutyela kunye nezitulo zokuphumla. Ilungele ukubaleka kwezothando kunye/okanye nabahambi abangatshatanga.
Le yindawo yabantu abadala kuphela (akukho bantwana kwaye akukho zilwanyana zasekhaya) kwizibini ezinengqondo ezifanayo okanye abantu ngabanye.
Le nto ilapha ixhomekeke kuwe ngokupheleleyo.
Bobabini abanini uFelipe kunye noJamani bahlala kule ndawo kwaye kuya kuluyolo lwethu ukukunceda ngayo nayiphi na inkxalabo onokuba nayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fort Lauderdale